समाचार – Page 2
कालु पाण्डेको समाधीस्थल हाम्रो तीर्थस्थल : प्रधानमन्त्री
९ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालु पाण्डेको समाधीस्थल नेपालीका लागि तीर्थस्थल भएको बताएका छन् । बिहीबार काजी कालु पाण्डेको समाधीस्थल दहचोकमा पाण्डेको पूर्णकदको शालिक अनावरण गर्दै उनले आफू हरेक वर्ष श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न त्यहाँ पुग्ने बताए । समाधीस्थलमा तेस्रो इन्द्रदह पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दहचोकलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने
पाँचखाल-मेलम्ची सडक स्तरोन्नति हुने
९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले काभ्रेको पाँचखालदेखि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीसम्मको सडक स्तरोन्नतीका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले यो सडक विस्तारका लागि काट्नुपर्ने रुखहरु हटाउन अनुमति दिएको हो । एशियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा यो २३ किलोमिटरको मार्ग स्तरोन्नति गरिँदैछ । भूकम्पपपछि एडीबीले प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणका सहयोग पुग्ने गरी सडकमार्ग स्तरोन्नतिको
अख्तियारले लेखा समितिलाई भन्यो- नाम तोकेर सिफारिस गर्दा वाइडबडी छानविनमा समस्या
९ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी प्रकरणमा लेखा समितिले गरेको सिफारिसले अप्ठेरो परेको बताएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले लेखा समिति सभापति भरत साहलाई नाम र रकम नै किटेर गरिएको कारवाही र निगमको सिफारिसले अख्तियार अप्ठेरोमा परेको बताएका हुन् । लेखा समिति सभापति साहले यसबारे समिति बैठकमै सांसदहरुलाई जानकारी दिएका
ड्राइभरले फिर्ता गरे हराएको सुनसहितको पर्स
९ फागुन, विराटनगर । विराटनगर– ८ कि रङ्गु राजवंशीले बिहीवार बिहान करिब साढे ८ बजे सुनका राखेको पर्स हराइन् । स्कुल जाने क्रममा बाटोमै पर्स हराएपछि उनी निकै चिन्तित थिइन् । रुँदै वडा प्रहरी कार्यालय हाटखोलामा निवेदन दिएकी राजवंशीको पर्स करिब ९ बजे भेटियो । बिहान साढे ८ बजे डिएभी स्कुलका चालक भोला कँडेलले सुनसहितको
पशुपति शर्मा भन्छन्– आमा कांग्रेस, बा र श्रीमती नेकपा, म स्वतन्त्र !
८ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो तीन/चार दिनमा राष्ट्रिय बहसको विषय नै बन्यो एउटा गीत । पशुपति शर्माले गाएको सो गीतलाई लिएर एकाएक उत्पन्न तरंग अझै मत्थर भइसकेको छैन । ‘लुट कान्छा लुट..’ बोलको गीत युट्युबमा अपलोड गरेको दुई दिनपछि शर्माले हटाएका थिए । त्यसपछि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको दबाव र धम्कीका कारण गीत हटाउन वाध्य भएको
ढुंगाको काप फोरेर उम्रियो पिपल !
८ फागुन, काठमाडौं । राराको सौन्दर्यमा रमाउन हिँडेका केही यात्रीहरु दैलेखको तल्लो ढुंगेश्वरको लहरेपुलमा पुग्दै थिए, एक हुल बालक पुल नजिकैको जालीमा अडेस लागेर मौरी भुन्भुनाए जसरी एकै भाकामा गीत गुन्गुनाइरहेको अवस्थामा भेटिए । यात्रुहरु रोकिए । एकजनाले भने, ‘ल गीत गाउ त, हामी सुन्छौं ।’ बालकहरुले तुरुन्तै गाइदिए, ‘काफल खान्या कुइया, मरुला जुनकीरी… यात्रुले
गीत विवादमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण : भावनामा बगेर लेखे, जनताले मन नपराएपछि हटाए
८ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपति शर्माको गीत प्रकरणमा पहिलो पटक बोलेका छन् । बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले शर्माको गीतलाई जनताले मन नपराएको बताएका हुन् । लोकगायक शर्माको नाम नलिइ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एउटाले भुलचुकले एउटा गीत बनायो अरे, लुट लुट केही काम लाग्दैन, लुटेर खा भाइ लुटेर खा ।
कोमल वलीको प्रश्न : बमजनलाई किन पक्राउ नगरेको ?
८ फागुन, काठमाडौं । बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद कोमल वलीले लिटिल बद्ध भनेर चिनिने रामबहादुर बमजनबारे सरकारको धारणा मागेकी छन् । उनले बमजनलाई किन पक्राउ नगरेको भनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रश्न गरिन् । ‘आफूलाई लिटिल बुद्ध भनेर देखाउँदै आएका रामबहादुर बमजनले गरेका क्रियाकलापहरु बाहिर स्वयं आएर सम्बन्धित युवतीहरुले, हाम्रा छोरीहरुले भन्दै आएको अवस्थामा पनि अहिलेसम्म किन
सत्तारुढ सांसदको प्रश्न : वाइडबडीका दोषीलाई किन कारबाही भएन ?
८ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले वाइडबडी विमान खरिदका दोषीलाई कारबाही नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन दिएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा प्रतिवेदन सार्वजिनक नभएको र कारबाही अगाडि नबढेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘वाइडबडी विमान भ्रष्टाचारमा सरकार किन चुप लागेर बस्यो ? सार्वजनिक लेखा समितिले
अस्ट्रेलियामा १००० नेपाली विद्यार्थी समस्यामा
सिड्नी । अस्ट्रेलियाको सिड्नी, ब्रिसबेन र मेलबर्नमा सञ्चालित व्यवसायिक शिक्षालयमा नर्सिङ विषय अध्ययनरत झन्डै एक हजार नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्न क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावास सक्रिय भएको छ । अस्ट्रेलियाका लागि नेपालका कार्यबाहक राजदूत दृपदा सापकोटाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यो समस्या समाधान गर्न हामी अस्ट्रेलियाका सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छौं
Prev 123 … 209 Next